Mpanonta printy nomerika, Mpanonta UV ary Mpanamboatra mpanonta Dtg | Focus
Focus, Rehetra ho an'ny sandan'ny mpanjifa.
Mpanonta printy Dtf
Machine mialoha fitsaboana
Focus Inc. Toturial Videos Ho an'ny Printer A3 Dtg 3350
Focus Inc. Video Tutorial ho an'ny A3 Uv Printer 3350
Focus Inc. Toturial Videos Ho an'ny A1 Uv Printers 6090
Focus Inc. Toturial Videos Ho an'ny Printer A2 Dtg 6040
Focus Inc. Toturial Videos Ho an'ny A2 Uv Printers 6040
Focus Inc. Toturial Videos For Atlas-1311
Focus Inc. Toturial Videos For Nebulas-35f
Focus Inc. Toturial Videos For Nebulas-62f
Fampirantiana ny Focus Inc.
Fanontam-pirinty santionany amin'ny mpanonta UV
Santionany fanontana nataon'ny Dtg Printers
Santionany fanontana amin'ny Dtf Printers
Mifantoka, Vonona hatao pirinty.
China Focus UV DTF mpanamboatra vahaolana mafana - Focus Inc.
Misy fotoana tsy maintsy ataonao ambony ny dokam-barotrao. Matetika, ny tena ilain'ny fitaovana vita pirinty dia fiangaviana tsy manam-paharoa izay mety tsy ampy indraindray ny fomba fanontam-pirinty nentim-paharazana. Ny famenoana metaly amin'ny fanananao vita pirinty dia afaka manome azy ireo ny 'maha-tokana' sy ny hatsarana ilaina mba hisy fiantraikany. Tsy vitan'ny hoe mijery tsara ireo vokatra ireo, fa mampita fahatsapana kilasy sy kalitao ihany koa.Misy fomba roa ahafahanao mampiasa vita vita amin'ny metaly ho an'ny entam-barotrao vita pirinty - Metallic Foil Stamping sy Metallic Ink Printing. Na dia ampiasaina hanatsarana ny hatsaran-tarehy sy hanome hazavana mamirapiratra amin'ny printy aza ireo teknika roa ireo, dia samy hafa be izy ireo, na eo amin'ny dingana na amin'ny vokatra farany.Metallic Foil Stamping, araka ny soso-kevitry ny anarana, dia ny dingana hanintonana foil amin'ny tahiryo amin'ny hafanana sy ny tsindry. Raha tsorina dia midika izany fa mametaka foil eo amin'ny endriky ny safidinao izay tsy vitan'ny hoe manome endrika miavaka, fa texture ihany koa.Amin'ny lafiny iray, ny Fanontam-pirinty Ink Metal dia dingana hafa tanteraka. Izy io dia mampiasa karazana ranomainty manokana izay mifangaro amin'ny poti-vy tena izy, ka manome endrika metaly mamirapiratra. Ny ranomainty dia ampiasaina voalohany amin'ny dingan'ny fanontam-pirinty, fa mba hahazoana ny vokatra irina, dia mety mitaky palitao manaraka ihany koa.
Focus UV fanontana ho an'ny Golf Ball! mpamatsy& mpanamboatra | Focus Inc.
Manonta amin'ny hazo, metaly, plastika, seramika, acryl, vera, hoditra, vato ary maro hafa miaraka amin'ny mpanonta UV namboarina avy amin'ny Focus Inc.! Miaraka amin'ny fahaizana manonta mivantana amin'ny substrate sy mivantana amin'ny zavatra, dia hanana ny fahafaha-manao ilaina amin'ny fanontana endrika mahazatra amin'ny vokatra isan-karazany ianao - haingana sy mora. Fanampin'izay, ny mpanonta UV tsirairay dia tonga miaraka amin'ny serivisy mpanjifa sy rindrambaiko miavaka, mba hahafahanao matoky fa ny ekipanao dia hanana fiofanana sy fanohanana ilaina mba hampandeha tsara ny famokarana.
Fampirantiana ny Focus A2 DTG Printer Athena Jet Plus fotsy tshirt fanontam-pirinty Mpamatsy& mpanamboatra | Focus Inc.
Ny fanontam-pirinty DTG dia dingan'ny fanontana sary amin'ny lamba sy akanjo—ary indrindra ho antsika, tees. Mampiasa teknolojia inkjet novaina izy io mba hanontana izay sary tianao amin'ny lobaka. Eritrereto ho toy ny mpanonta inkjet goavambe, fa ho an'ny lobaka. Raha tokony hanao pirinty taratasy na flyer mankaleo ho an'ny klioban'ny bokinao ny milina DTG anay, dia manao pirinty dragona ratsy mitsambikina mitsambikina eo amin'ny sisin'ny unicorn mirehitra — na toy ny, bitro lil bunny mahafatifaty amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zanakao. Hanonta tanteraka izay tianao izahay, fa aleonay ny dragona ratsy.
Alpha fitaratra fanontam-pirinty Products | Focus Inc.
Ny vokatry ny fitaratra dia atao pirinty amin'ny vera na acrylic tranparent, izay hitanao amin'ny sary eny ambonin'ny tany fa ny sary dia ao ambadika. Ahoana ny fanontana ity vokatra ity?Voalohany, manonta loko eo amin'ny vera na mangarahara acrylic ary avy eo manonta loko fotsy, ny fitaratra vokany dia azo vita. Ny farany fotsy dia tokony ho fototra mba ho mazava kokoa ny loko.
Mba hamonjena ny fotoana sy ny herin'ny mpanjifa, dia manome serivisy "ONE STOP" izahay izay misy ny rejisitry ny Call center, ny fanontaniana takiana, ny fikarakarana olana, ny diagnostika an-tserasera, ny fandefasana kojakoja sy ny famerenana miverina. Ny tanjonay farany: manome fahafaham-po ny fitakian'ny tsena; manome ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa, izay rehetra ataonay, ho anao rehetra.Ny fitsipiky ny serivisy: mihoatra ny fanirianao, ny ho orinasa Increment Service.Ny fahatokisanay sy ny tsy fivadihana: Ny fahatokisana sy ny andraikitra manokana amin'ny fifandraisana rehetra.
Mba hamonjena ny fotoana sy ny herin'ny mpanjifa, dia manome serivisy "ONE STOP" izahay izay misy ny rejisitra Call center, ny fanontaniana takiana, ny fikarakarana olana, ny diagnostika an-tserasera, ny fandefasana kojakoja ary ny fandefasana miverina.
Ny Filozofia Fitantananay
Tombontsoa iombonana, Fanavaozana ary ny maha-olona.
Ny tanjontsika amin'ny fanangonana
Manome fahafaham-po ny fitakian’ny tsena; manome ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa, izay rehetra ataonay, ho anao.
Ny Asa fanompoanay
Amboary ny fanirianao, ho lasa orinasa Increment Service.
Ny fahatokiana sy ny tsy fivadihantsika
Fitokisana sy andraikitra manokana amin'ny fifandraisana rehetra.
Focus Digital Technology Co., Ltd. naorina tany Shanghai, Sina. Iza no mpanamboatra mamorona sy mamokatra ny tsara indrindra sy mety ho DTG mivantana amin'ny akanjo mpanonta printy, nomerika LED-UV flatbed mpanonta printy, pretreatment milina, CTS solosaina amin'ny efijery imaging rafitra, famantarana&dokam-barotra vokatra ho an'ny mpanjifa. Nametraka ny vahaolana Vonona-To-Print izahay. Nifantoka tamin'ity sehatra fanontana nomerika ity izahay nandritra ny 17 taona. Izahay dia manome ny vokatra rehetra amin'ny vidiny mirary sy ny fanohanana ara-potoana miantehitra amin'ny tsipika famokarana manokana, traikefa matihanina, fantsona fividianana ampahany henjana ary hetsika tompon'andraikitra ambony, mifantoka amin'ny tsena izahay mba hanomezana vaovao lehibe farany ary hamorona vokatra mahasoa, ny anay Ny ekipa mpanohana manana traikefa dia manangona ny teknika rehetra ary mahazo fiofanana vaovao ara-potoana mba hanomezana fanohanana tsara indrindra.
Ny mpivarotra rehetra dia mety hiatrika ireto olana ireto: Tsara kalitao nefa lafo vidy, vidiny mirary nefa ratsy serivisy, fanohanana tsara fa ratsy kalitao, fiampangana tsy misy dikany, tsy mahazo ny fanofanana feno, tsy afaka mahazo ny fanohanana ara-potoana, Ny valiny dia tara noho ny fanadinana sarotra. ary fampiharana. Focus digital dia orinasa iray hamahana ity karazana olana ity ho anao. Fanohanana "LONG-DISTANCE-LOG-ON -DIAGNOSIS" amin'ny fotoana tena izy; Ny serivisy "ONE STOP" dia manondro ny rafitra fanaraha-maso kalitao "Efatra" (Departemantan'ny fitaovana fanaraha-maso-Manangona tsipika fanaraha-maso-Sampan-draharahan'ny QC fanaraha-maso-Sampan-draharaha Logistika fanaraha-maso") rafitra fanaraha-maso kalitao mba hahazoana antoka fa ny vokatra rehetra dia tsy misy afa-tsy alohan'ny fanaterana, saingy tsy misy vokatra 100 % tonga lafatra, Ny fanohanana ara-potoana sy mahomby no zava-dehibe indrindra, ny mpanjifa dia afaka mahazo ny fanohanana mahomby amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny SUPPORT ONLINE sy ny fanohanan'ny DIAGNOSE LONG-DISTANCE-DIAGNOSE mba hahazoana antoka fa ho voavaha haingana ny olana sy fanontaniana rehetra. Angoninay koa ny olana rehetra mba ho antontan-taratasy vahaolana, mba ahafahan'ny mpanjifa misintona avy amin'ny ftp anay.
Ho an'ny fitsitsiana ny fotoana sy ny herin'ny mpanjifa dia manome serivisy "ONE STOP" izahay izay misy ny rejisitry ny Call center, ny fanontaniana takiana, ny fikarakarana olana, ny fitiliana an-tserasera, ny fandefasana kojakoja sy ny fiverenana miverina. Ny tanjonay farany: manome fahafaham-po ny fitakian'ny tsena; manome ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa, izay rehetra ataonay, ho anao rehetra.Ny fitsipiky ny serivisy: mihoatra ny fanirianao, ny ho orinasa Increment Service.Ny fahatokisanay sy ny tsy fivadihana: Ny fahatokisana sy ny andraikitra manokana amin'ny fifandraisana rehetra.
Nifantoka tamin'ity sehatra fanontana nomerika ity izahay nandritra ny 17 taona.
Shina AHOANA INDIANINA NY DISTRIBUTOR NO NIFIDY FOTOTRA UV SY DTG ATO CHINA ? mpanamboatra - Focus Inc.
Mitady Agent GlobalFocus Inc. dia mitady masoivoho sy mpaninjara eran'izao tontolo izao.Izay liana sy matoky tena ho agenty dia mifandraisa amin'ny sampana varotra ao amin'nyinfo@focusij.com
Mpamatsy Consultation Customer& mpanamboatra | Focus Inc.
Asa tsara avy amin'ny mpanjifa Focus, matihanina kokoa izy ireo, mandeha tsara sy tsara kokoa ny orinasa.Avia ary miaraha miasa aminay Focus Inc., mahafantatra bebe kokoa momba ny mpanonta printy, mahafantatra bebe kokoa momba ny tsena ary manolotra vokatra tsara eny an-tsena.
Ny mpanjifa dia mitsidika ny birao sy ny orinasa Focus
Mba hamonjena ny fotoana sy ny herin'ny mpanjifa, dia manome serivisy "ONE STOP" izahay izay misy ny rejisitra Call center, ny fanontaniana takiana, ny fikarakarana olana, ny diagnostika an-tserasera, ny fandefasana kojakoja ary ny fandefasana entana.Ny filozofia fitantananay: Tombontsoa iombonana, fanavaozana ary ny maha-olombelona.Ny tanjonay farany: manome fahafaham-po ny fitakian'ny tsena; manome ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa, izay rehetra ataonay, ho anao.Ny fitsipi-panompoanay: mihoatra ny fanirianao, ho lasa orinasa Increment Service. Ny fahatokisanay sy ny tsy fivadihana: Ny fahatokisana sy ny andraikitra manokana amin'ny fifandraisana rehetra.
Feon'ny mpanjifa an'ny mpanonta DTG Athena Jet Plus avy amin'ny Focus Inc.
Tena faly izahay fa ny vokatray dia manampy ny mpanjifa hahatsapa ny idealy sy ny planiny eo amin'ny fiainany. Tena faly mizara ny dia sy ny fifaliana aminao. Raha te hijery ilay horonan-tsary ianao dia afaka mahita aingam-pandraharahana ao amin'ny horonan-tsary.